News Africa Grace Mugabe granted immunity after leaving S Africa
Sunday, 20 August 2017 10:33
South African police had placed border posts on "red alert" to prevent her from leaving the country, but the international relations minister granted her diplomatic immunity.
"I hereby recognise the immunities and privileges of the First Lady of the Republic of Zimbabwe, Dr Grace Mugabe," said the minister, Maite Nkoana-Mashabane, in a notice published in South Africa's Government Gazette on Sunday but signed on Saturday.
"We will take a long-term approach on this," said Willie Spies, a legal representative at AfriForum, an organisation that primarily represents South Africa's white Afrikaner minority.
"Those countries that have traditionally been supportive of Zimbabwe would lambast South Africa for arresting Mrs. Mugabe and prosecuting her," Kajee said.
The Zimbabwean president's outspoken wife has been criticised for a fiery temper and lavish shopping expeditions, but her rising political profile has some asking whether she is manoeuvring to succeed her husband.
READ MORE: South Africa's borders on 'red alert' for Grace Mugabe
She recently said Zimbabwe's ruling party should restore a provision in its constitution stating one of the party's vice presidents should be a woman, and has publicly challenged her 93-year-old husband to name a successor.